Sun, Jul 5, 2020 at 2:26am
काठमाडौं, २ असार राजस्व अनुसन्धान विभागले अगामी साउन महिनादेखि अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ। ‘भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’लागु गरी मालबाहक सवारी सुरक्षामा नयाँ प्रविधि लागू गर्न लागिएको विभागले उल्लेख गरेको छ। राजश्व चुहावट नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै विभागले उक्त प्रणाली लागू गर्न लागेको हो। आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि मालवस्तु ढुवानी गर्ने साधनहरुले मालसामान ओसार–पसार गर्नुअघि तथा ढुवानी..
बझाङ, २ असार । सदरमुकाम चैनपुर नजिकै रहेको डुङ्रीबाट मष्टागाँउपालिका जाँदै गरेको से। १ ज १०७२ नम्बरको जीप मष्टाको वडा नं १ डौठी भन्ने ठाउँमा दुर्घटना हुँदा ९ जनाको मृत्यु भएको छ । वडा प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव निरीक्षक महानन्द जोशीका अनुसार जीप अप्ठेरो ठाँउमा खसेको र मान्छे समेत जान नसक्ने भएका कारण उद्वार गर्न निकै समस्या भएको छ । दुर्घटनाको कारण..
सिरहा, २ असार सिरहा आसपासका क्षेत्रमा भारतीय नम्बर पलेटको गाडीको प्रयोग बढेको पाइएको छ । भारतीय नम्बरका गाडीको प्रयोगले राजश्व चुहावट भइरहेको छ । राजश्व नतिरी भारतीय गाडी प्रयोग गर्ने चलन बढ्दै गएको जिल्ला भन्सार कार्यालय सिरहाका कर्मचारी बताउँछन् । प्रभावशाली तथा माथि पहुँच भएका व्यक्तिले भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी चढ्ने गरेकाले नियन्त्रणमा समस्या आएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय..
हेटौँडा २ असार । चितवनको नारायणगढबाट वीरजञ्जतर्फ जाँदै गरेको ना५ख ४०१५ नंको दिवासेवाको यात्रुवाहक बस हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं १५ स्थित हेटौँडा वीरगञ्ज सडकखण्डको चुरेमा अनियन्त्रित भई सोमबार बिहान दुर्घटना हुँदा उपचारको क्रममा एक महिलाको हेटौँडा अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएकी महिलाको अहिले सनाखत भइनसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । सो दुर्घटनामा परी घाइते भएका २० यात्रुको हेटौँडास्थित..
भरतपुर, २ असार । चितवनमा बसको ढोकाबाट हामफाल्दा एकको मृत्यु भएको छ । आइतबार नारायणगढबाट भण्डारातर्फ जाँदै गरेको लु१ख ६९९१ नंको बसमा सवार रत्ननगर नगरपालिका–९ बस्ने ३७ वर्षीया बालिका आचार्यले भरतपुरको चौबीसकोठीमा बसको ढोकाबाट हामफालेकी हुन् । उनको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ । शव परीक्षणका लागि भरतपुर अस्पतालमा राखिएको छ । घटनाको..
काठमाडौँ, १ असार । काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्मार्ट पार्किङ प्रणाली सञ्चालनमा आउने भएको छ । केहि दिनअगाडि परीक्षणस्वरुप सुरुवात गरिएको सशुल्क स्मार्ट पार्किङ सेवा आइतबारबाट न्यूरोडमा सुरुवात गर्न लागिएको हो । स्मार्ट पार्किङ प्रणाली न्यूरोडका पाँच स्थान रामेश्वरम, विशाल बजार, खिचापोखरी, धर्मपथ र पाकोमा उपलब्ध हुने स्मार्ट पार्किङका सञ्चालक कम्पनी ह्विल्स ट्रुलीले जनाएको छ । तीन महिनाअघि स्मार्ट पार्किङ निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको..
काठमाडौं, ३२ जेठ । नेपालको यातायात क्षेत्रलाई विगत ६ दशकदेखि नीजि क्षेत्रले नै हाँकिरहेको छ । यसअघि बिभिन्न समिति वा महासंघ अन्र्तगत रहेर संगठित हुँदै आएका यातायात व्यावसायीहरु अहिले भने २ तिहाईको सरकारले ल्याएको नयाँ प्रावधान अनुशार काम गरिरहेका छन् । विश्वका अनेकौं देशको यातायात क्षेत्र प्रत्यक्षरुपमा त्यहाँको सरकारले चलाउने भएतापनि नेपालमा भने सो जिम्मेवारीलाई नीजि क्षेत्रले निर्वाह गरिरहेको छ । यातायात व्यावसायीहरु..
भीमदत्तनगर, ३१ जेठ । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–६ वनगाउँस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा शुक्रबार बिहान भएको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका तीनै जनाको सनाखत भएको छ । गड्डाचौकीबाट भीमदत्तनगर बजारतर्फ आइरहेका म१ह ७६३ नंको अटोलाई विपरीत दिशाबाट गइरहेको से१त ७३३ नंको जेसिबीलाई ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा परी बैतडीको देहीमाण्डौँ नगरपालिका–२ का अन्दाजी २८ वर्षीय किशन बोहरा, पोखरा पृथ्वीचोक बस्ने ३५ वर्षीया बीना रिजाल र..
सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने निर्णय फिर्ता, किन पछि हट्यो विभाग ?
काठमाडौँ, ३० जेठ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएको छ । चौतर्फी दबाबपछि सार्वजनिक यातायातमा बढाएको भाडा तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्षमा विभाग पुगेको हो । विभागका प्रवक्ता तीर्थ खनालले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । आजै दिउँसो असार १ देखि लागू हुनेगरी यातायात भाडा २० प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार कार्यवहाक..
उपत्यकामा यी रूटमा चल्छ अब रात्री बस, १२ कम्पनीले पाए स्वीकृति
काठमाडौं, ३० जेठ उपत्यकामा रात्रिकालिन बस सेवा शुरु गर्नका लागि १२ वटा कम्पनीले स्वीकृति पाएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले असार १ गतेबाट रात्रिकालीन बस सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएसँगै विभिन्न कम्पनीलाई रातमा पनि बस चलाउन स्वीकृति दिएको हो। ..
कोटेश्वरको जाम हटाउन जापानको ३ विकल्प, दुई ठाउँमा सुरुङ मार्ग, फ्लाइओभर पनि
काठमाडौँ, ३० जेठ काठमाडौंका मुख्य इन्टरसेक्सनमा ट्राफिक सुधारका लागि अध्ययन गर्न आएको जाइकाको टोलीले कोटेश्वरका लागि सुरुङमार्ग, फ्लाई ओभरसहित तीनवटा विकल्प दिएको छ । केहि समयअघि जाइकाले कोटेश्वरका लागि तीन विकल्प सहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार, एक महिनाभित्रै जाईकाले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट दिने छ। ७ जना प्राविधिक सहितको टोलीले फेब्रुअरीदेखि अध्ययन..
धनगढी विमानस्थल मर्मतको काम सम्पन्न, उडान पुन:सञ्चालन
काठमाडौँ, २९ जेठ बुधबारदेखी कैलाली जिल्लाको एक मात्र विमनस्थल धनगडी विमानस्थल सुचारु भएको छ।विमानस्थलको धावनमार्गमा कालोपत्रेको काम गर्नुपर्ने भन्दै गत बैशाख २२ गतेदेखि विमानस्थल बन्द भएको थियो। वि.सं. २०२१ साल माघ १४ गतेबाट सुरु भएको धनगडी विमानस्थल १४ वर्षअघि कालोपत्रे गरिएको थियो। सामान्यतय कालोपत्रे भएको १० बर्षमा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भए तापनि धनगढी विमानस्थलको धावनमार्ग १४ वर्षपछि मर्मत गरिएको विमानस्थलका प्रमुख तेजबहादुर बुडथापाले..
काठमाडौँ, २८ जेठ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को जापानको ओसाका उडान गर्ने योजना डेढ महीनापछि धकेलिएको छ । निगमले आगामी असार १९ गतेदेखि काठमाडौँ–ओसाका सिधा उडान गर्ने योजना बनाएको थियो । तर टिकट बुकिङ कम भएको र पर्यटकीय सिजन प्रतिकुल रहेको भन्दै निगमले निर्धारित उडान तालिका परिवर्तन गरी आगामी भदौँ १२ गते (२९ अगष्ट २०१९) देखि नियमित उडान..
करिडोर निर्माणसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज, उपत्यकामा हुने जाममा कमी
काठमाडौँ, २८ जेठ प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले करिडोर निर्माणसँगै उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुँदै गएको बताउनुभएको छ । नयाँ बसपार्क–म्हैपी हुँदै बालाजु करिडोरको आज निरीक्षण गर्दै उहाँले करिडोर निर्माणले उपत्यकामा हुने ट्राफिक जाममा कमी आउने बताउनुभएको हो । महानिरीक्षक खनालले उपत्यकाको ट्राफिक सुधारका लागि महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले तीनमहीने कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको बताउँदै उक्त करिडोर निर्माणसँगै मुख्य सडकमा हुने सवारी चाप घट्ने उल्लेख..
थली–साँखु सडकखण्ड तत्काल स्तरोन्नति गर्ने सहमती
साँखु, २८ जेठ काठमाडौँको चाबहिल–साँखु सडकखण्डअन्तर्गतको थली–साँखु सडकखण्ड तत्काल स्तरोन्नति गर्ने सहमति भएको छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकास्थित थलीमा नगरपालिकासँग विद्यार्थी र स्थानीयवासीको सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको छ । चाबहिलबाट थली हुँदै साँखुसम्म पुग्ने सडक नबनेपछि आज बिहान अनिश्चित समयसम्म बन्दको आह्वान गर्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सडक निर्माण थालेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सडक नबनेपछि थलीका स्थानीयवासीले सडक खण्डको विभिन्न..
हर्नमा कडाइ : एकैदिन ४ सय १३ सवारीसाधन कारवाहीमा, ध्वनि प्रदूषणको यस्तो असर !
काठमाडौँ, २८ जेठ । ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकामा हर्न कारवाहीलाई कडाइ गरेको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाभित्र ध्वनि प्रदूषणको समस्या गम्भीररूपले बढेपछि जथाभावी हर्न बजाएर गुड्ने सवारीसाधनमाथि सोमबारदेखि हर्नमा कडाइ गरेको हो । महाशाखाले सोमबार मात्र ४१३ सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको छ । ध्वनि प्रदूषणले श्रवणशक्तिमा ह्रास हुने, रक्तचाप बढ्दै जाने, हृदयाघात हुने, पक्षघात हुने, श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर हुने, स्मरण शक्तिमा कमी..
रौतहटमा ट्रकले ठक्कर दिँदा २ भारतीय तीर्थयात्रीको मृत्यु, २१ जना घाइते
काठमाडौँ, २८ जेठ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत रौतहटकाे चन्द्रनिगाहपुरमा भारतीय तीर्थयात्री बोकेको बसलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा दुई भारतीय तीर्थयात्रीको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा २१ जना घाइते भएका छन् । चन्द्रपुर नगरपालिका–१ मंगलपुर नजिकै राजमार्गमा राति १ बजे तीर्थयात्रीलाई शौच गराउन रोकेको बसलाई ट्रकले पछाडिबाट ठक्कर दिएको हो । ना ६ ख ९०३० नम्बरको बसमा को १ ख २६२५ नम्बरको ट्रकले पछाडिबाट ठक्कर दिँदा..
नेपालकाे रेल काेलकातासम्म सञ्चालन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति
काठमाडौँ, २७ जेठ नेपाल–भारतबीच नेपालको रेल वीरगञ्ज र विराटनगरबाट भारतको कोलकाता-हल्दियासम्म सञ्चालन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । दुई देशबीचको रेल सेवा सम्झौताअन्तर्गतको हालै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न तेस्रो विस्तृत पुनरावलोकन बैठकमा भारतले नेपालको वीरगञ्ज र विराटनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि सहमति जनाएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमबार काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गरी त्याे सहमतिले छिट्टै लिखित रुप लिने पनि स्पष्ट..
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘रनवे रिह्याब’ को मुख्य काम सकियो
काठमाडौँ, २७ जेठ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग स्तरोन्नति ‘रनवे रिह्याब’ को मुख्य काम सकिएको छ । विमानस्थलको तीन हजार ५० मिटर लामो धावनमार्गको पहिलो चरणको कालोपत्र ‘पिच’ सम्पन्न भएको विमानस्थलले जनाएको छ । धावनमार्ग स्तरोन्नतिको पहिलो चरणको मुख्य काम सकिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) अन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाका निर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार धावनमार्ग खनेर पिच..
सडक जाम घटाउन राष्ट्रपतिले चालिन् यस्तो कदम
काठमाडौँ, २७ जेठ । सडकदेखि विमानका यात्रुसम्मले दुःख पाउन थालेको भन्दै विरोध भएपछि राष्ट्रपतिको सवारीमा सुधार गर्न थालिएको छ । सामान्य कार्यक्रम राष्ट्रपतिले आफ्नै कार्यालयमा उद्घाटन गर्न सुरु गरेकी छिन् । गत २१ जेठमा राष्ट्रपति भण्डारी नेपालगन्ज गएकी थिइन् । सवारीका कारण गणतन्त्रकै बदनाम भएको गुनासोपछि सुधार गरिएको हो अनौपचारिक भ्रमणमा गएकाले विमानस्थलमा नोटामसमेत जारी गरिएन । उनी नियमित उडानमार्फत गइन् र २३..
प्रहरीको गुनासो : दुर्घटना झन् बढ्यो, दायाँ-बायाँ नहेरी एकसुरमा हुइँक्याउँछन् चालक !
काठमाडौँ, २६ जेठ । अघिल्लो हप्ता काठमाडौँको सुन्धारामा एउटा निजी कार र ट्याक्सी ठोक्कियो । क्षतिपूर्तिको विवाद महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखासम्म आइपुग्यो । उक्त दुर्घटनामा परेको कारका चालकले मादक पदार्थ सेवन(मापसे) गरेका थिए । उनले दायाँ बायाँ नहेरी एकसुरमा हुइँक्याउँदा ट्याक्सी ठोक्किन आएको प्रहरीको विश्लेषण छ । दुर्घटनाको गुनासो सुन्ने शाखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रभुप्रसाद ढकालले कार चालकको पहिलो गल्ती औँल्याउँदै भन्नुभयो, “मापसे..
१७ वर्षपछि भरतपुर विमानस्थलको धवनमार्गमा कालोपत्र थप्ने काम शुरु
रत्ननगर, २६ जेठ । बजेट अभावले लामो समयदेखि रोकिएको भरतपुर विमानस्थलको धवनमार्गमा कालोपत्र थप्ने काम शुरु भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्रधिकरणले उक्त विमानस्थललाई रु नौ करोड उपलब्ध गराएकाले १७ वर्षपछि धवनमार्गमा कालोपत्र थप्ने काम ‘ओभरले’ गर्न थालिएको हो ।भरतपुर विमानस्थलका प्रमुख पवनकुमार गौतमले सामान्यतया विमानस्थल निर्माण भएको सातदेखि १० वर्षभित्र कालोपत्र गरिनुथ्र्यो भन्नुभयोे । प्रधिकरणले देशभरकै विमानस्थललाई मर्मत गर्दा बजेट र..
जहाजमा सेतो रङ लगाइनुको कारण यस्तो छ ...
एजेन्सी, २५ जेठ सन् १९८० मा अमेरिकाको विमान कम्पनीका मालिक रोबर्ट क्रेन्डलले एउटा अनौठो बचत योजना सुनाए । उनका अनुसार जहाजमा खान दिने सलादबाट ओलिभ मात्रै हटाउँदा पनि वर्षमा २८ हजार डलर बचत भएको थियो । ओलिभ हटाउँदा जहाजको वजनमा पनि कमी आएको थियो र तेलको खपत घटेको उनको भनाई थियो । उनको भनाई कति सत्य हो, त्यो त पुष्टि भएन तर..
कलंकी- महाराजगंज सडकमा रहेका संरचना १५ दिनभित्रै हटाउनुपर्ने, ३१/३१ मिटरसम्मको सडक सीमा !
काठमाडौं, २५ जेठ । काठमाडौ चक्रपथ सुधार योजनाले सार्वजनिक सूचना निकाल्दै कलंकी-महाराजगंज सडक सीमामा अस्थायी/स्थायी संरचना १५ दिनभित्र हटाउनुपर्ने भएको छ । सो समयमा नहटाए सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा १८ बमोजिम 'राईट अफ वे' क्लियर गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालयबाट भत्काउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी भत्काउँदा लाग्ने खर्च सम्वन्धित घरधनीबाट असुल गरिने चेतावनी समेत दिएको छ..
जोमसोम विमानस्थल १५ दिनका लागि बन्द , असारभित्र सबै काम सकिने
बागलुङ, २४ जेठ मुस्ताङको जोमसोम विमानस्थल भोलि शनिबारदेखि १५ दिनका लागि बन्द हुने भएको छ । विमानस्थलको धावनमार्गमा कालोपत्र थप (ओभरले) गर्नुपर्ने भएकाले उडान बन्द गरिएको जोमसोम नागरिक उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ । “असार ७ गतेसम्म विमानस्थल बन्द रहन्छ”, कार्यालयप्रमुख भानु कोइरालाले भन्नुभयो, “त्यतिञ्जेल धावनमार्ग सुधारको काम सकिन्छ ।” जोमसोममा हावाहुरी चल्ने र मौसम पनि फेरबदल भइरहने हुँदा उडान नै रोकेर काम..
काठमाडौँ उपत्यकामा सवारीसाधनको गति तोकिँदै, नयाँ प्रावधान आउँदै
काठमाडौँ, जेठ २४ गते । तपाईंले काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा प्रतिघण्टा ५० किलोमिटरभन्दा बढी गतिमा सवारी साधन चलाउनुहुन्छ भने ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा परी पाँच सयदेखि एकहजार पाँचसय रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्नु पर्नेछ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले यसबारे जानकारी गराउनुभएको हो । प्रतिघण्टा ५० किलोमिटरभन्दा बढी गतिमा सवारी साधन चलाउन नपाउने प्रावधानको पहिलो चरणअन्तर्गत विस्तारित चक्रपथको कोटेश्वर–कलङ्की खण्डमा..
धनगढी विमानस्थलमा धावनमार्गको काम सकिएन, एक साता समय थपियो
अत्तरिया, २३ जेठ । एक महीनाको अवधिमा धावनमार्ग स्तरोन्नतिको काम पूरा नभएपछि धनगढी विमानस्थल थप एक सातासम्मका लागि बन्द रहने भएको छ । निर्माण कम्पनीले मौसम प्रतिकूल नभए यही जेठ २९ गतेबाट विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा आउने जनाएको छ । गत वैशाख २२ गतेबाट उडान सेवा बन्द गरेर विमानस्थलमा धावनमार्ग स्तरोन्नतिका साथै क्षेत्र विस्तारको काम भइरहेको विमानस्थलका प्रमुख तेजबहादुर बुड्थापाले बताउनुभयो । उहाँका..
यात्रु नपाएको भन्दै वायुसेवा निगमको जापान उडान स्थगित
काठमाडौं, १६ वैशाख नेपाल एयरलाइन्सले यात्रु नपाएको भन्दै तत्कालका लगि जापान उडान स्थगित गरेको छ । कम्पनीले उडान सुरू गर्ने नयाँ मिति पनि तय गरेको छैन । आगामी जुलाई ४ अर्थात् असार १९ बाट ओशाकाको कान्साइ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा निगमको वाइडबडीले उडान भर्ने तालिका थियो । तर, बुकिङ खोलेको एक महिनासम्म पनि राम्रो संख्यामा यात्रु नपाएपछि तत्काल जापानमा उडान नथालिने भएको हो । यात्रु नै..
निगम व्यवस्थापकीय लापरबाहीका कारण जापान उडान अनिश्चित
काठमाडौँ, २२ जेठ । मध्य असारदेखि सातामा तीन दिन जापानमा सिधा उडान घोषणा गरेको नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापकीय लापरबाहीका कारण पछि हटेको छ । निगमले वैशाख २० गते विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘असार १९ गतेदेखि जापानको ओसाकामा नियमित उडान गर्छौं’ भनेको थियो । तर एकाएक तालिका स्थगन भएको छ । ‘असार १९ गतेका लागि तोकिएको जापानको उडान रोकिएको सूचना सबै मातहतका विभाग र..
लोप हुदै गएको गोरुगाडा भद्रपुर नाकामा सामान ओसार्दै
भद्रपुुर, २२ जेठ । जतिबेला तराईमा मोटरगाडीको चलन आइसकेको थिएन, त्यसबेला सामान ढुवानीका लागि गोरुगाडा वा राँगागाडाको विकल्प थिएन । हरेक किसान र व्यापारीसँग गाडा हुन्थे । किसानहरु खेतमा गोबर मल लैजान, पाकेको बाली घर भित्र्याउन र राइस मिलमा कुटानी पिसानीको लागि धान लैजान राँगागाडीको प्रयोग गर्थे । पहिला पहिला बिहेमा जन्ती लैजान र बेहुलाबेहुली बोक्न समेत गोरुगाडीको प्रयोग गर्ने चलन थियो..
Results 1268: You are at page 16 of 43